Anyị nwalere Mujjo, Uwe mkpuchi abụọ na-acha uhie uhie wee gbakwunye koodu ntinye ego 10% | Akụkọ akụrụngwa
Ugbu a anyị nọ n’etiti mkpọmkpọ ekeresimesi, kedu ụzọ ka mma karịa ịnwe echiche maka onyinye ma ọ bụ onyinye onwe onye na nke a anyị nwere ngwaahịa dị mma ịnwe mgbe oyi dị, uwe aka na-eme ka aka anyị dị ọkụ.
N'echiche a, mgbe anyị tinyere aka, ajụjụ mbụ na-abata n'uche taa bụ ihe karịrị otu, ha dị emetụ n'ahụ? n'okwu a na azịza ya bụ eziokwu ma ọ bụghị naanị otu mkpịsị aka abụọ ma ọ bụ mkpịsị aka abụọ, akụkụ ahụ dum bụ ihe na-emetụ n'ahụ ma ha gbakwunye ụdị silicone dị n'ọbụ aka aka ka ọnụ anyị ghara ịmịlata mgbe anyị na-eji ya na uwe aka.
2 Ndakọrịta na ojiji
3 Ego ego maka ndị na-agụ Gadget Actualidad
Mujjo, bu akara nwere ngwa ahia nke mma na usoro nke imewe na n'ichepụta ihe, yabụ na anyị agaghị enwe nsogbu na nke a yana gbasara uwe aka anyị nwere na tebụl, Igwe Igwe Igwe Igwe Na-ahụkarị, anyị enweghị ike ịsị na nke a ada ada.
Ihe n'ichepụta ihe bụ akpụkpọ anụ maka akụkụ nke elu, ha na-agbakwunye ọlaọcha, naịlọn na spandex eri na mpụga ka gloves na-emetụ aka na ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị ma nwee ike ịmechi aka ahụ nke ọma na n'ime ka ha gbakwunye acrylic ya na oyi akwa okpukpu abuo nke zuru oke site na oyi.
Ndakọrịta na ojiji
Mkpịsị Mujjo dakọtara na ihuenyo mmetụ nke ngwaọrụ niile dị ugbu aIPhone, Blackberry, Samsung, HTC, LG ma ọ bụ ekwentị ọ bụla nwere mmetụ ihuenyo anyị ji eme ihe ga-adaba na gloves ya mere na nke a agaghị abụ nsogbu.
Uzo nke gloves maka iweputa nsogbu bu ihe doro anya na ha adighi mmiri, ma oburu na anyi suo ha otutu anyi gha aghafu ihe ndi ozo na anyi agaghi enwe ike iji ha. N'aka nke ọzọ, arụmọrụ ya bụ mkpokọta na ọnọdụ akọrọ, oyi agaghị emetụta anyị n'oge oyi a site n'aka ndị a site na Mujjo. Ikpeazụ a na ngwụsị izu Anyị nwalere ha na ọnọdụ okpomọkụ dị n’etiti 0 na 7 Celsius na eziokwu bụ na ha mere ezigbo ihe. Ha nwere bọtịnụ dị na elu nke nkwojiaka nke na-enye anyị ohere imechi glove kpamkpam na na ha anaghị ekwe ka oyi gafere, ha dị ezigbo ọkụ.
Ọzọ uru dị na uwe ndị a bụ na ha bụ naanị mkpịsị aka, anyị anaghị eyi ihe ọ bụla na-egosi ha dịka aka aka na-amasị m. Ha anaghị eyi ihe ọ bụla ga-eme ka a mata onye ha bụ ma ọ bụ mee ka onye ahụ mara ihe na nke a bụ a gbakwunyere ebe m.
Ego ego maka ndị na-agụ Gadget Actualidad
Ọnụahịa nke uwe ndị a Mujjo Double Layered Touchscreen enweghị ihe jikọrọ ya na ihe anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa ndị China ma ọ bụ na nnukwu ụlọ ahịa. Ọnụ ego ndị a bụ euro 34,95 mana maka ndị na-agụ Actualidad Gadget chọrọ ịzụ ha, Mujjo na-enye anyị a ego koodu agbakwunye: actualitygadget nke anyi ji enweta ya Nsonye 10% na-ahapụ ọnụahịa ikpeazụ fọdụrụ na euro 31,45 na mbufe dị iche. Uwe pụrụ ịzụta kpọmkwem site na weebụsaịtị onye nrụpụta Mujjo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Anyị nwalere Mujjo, Uwe mkpuchi abụọ nke nwere agba abụọ wee gbakwunye koodu ntinye ego 10%